RW Cumar iyo Axmed Madoobe oo kulan ku yeeshay Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Cumar C/rashiid Cali oo maanta booqasho ku tagay magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka ku meel gaarka ah ee Jubaland ayaa waxaa uu kulan la yeeshay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Madoobe.
RW Cumar C/rashiid oo kulanka ka dib la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in u jeedada uu Kismaayo u tagay ay qeyb ka tahay qorshiyaasha xukuumadda Soomaaliya ay ku doonayso adkeynta maamulada ka jira dalka.
R/wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in arimaha maamulka Jubaland uu kala hadlaayo ay kamid tahay dib u eegista dastuurka Soomaaliya, waxaa uu sheegay Ra’iisulwasaaruhu xusay in maalmo uu joogi doono magaalada Kismaayo.
Madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaan “Axmed Madoobe” ayaa Ra’iisul wasaaraha ugu mahadceliyay booqashadiisa Kismaayo isagoo intaa ku daray in ay Ra’iisulwasaaraha kala hadli doonaan arimaha quseeya maamulka Jubaland.
R/wasaare Cumar ayaa isku dayaya inuu xal u helo khilaaf ka taagan sida loo dhisay baarlamaanka Juba oo mooshin ka dhan ah horyaalla baarlamaanka federaaliga ah ee Soomaaliya.